मोबाइलले बिगार्न सक्छ जोडी, यी ४ कुरा याद गरेमा हुन्न टेन्सन – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / मोबाइलले बिगार्न सक्छ जोडी, यी ४ कुरा याद गरेमा हुन्न टेन्सन
admin November 13, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 57 Views
यद्यपि यो उपयोगी हुँदाहुँदै पनि यसका कतिपय नकारात्मक पाटो छ । यसको अर्थ मोवाइल आफैमा खराब बस्तु भने होइन । तर, यसको प्रयोगमा गरिने कतिपय असावधानी वा यसप्रतिको बढी नै आशक्ति अहिले धेरैको निम्ति समस्या बन्दै गइरहेको छ । खासगरी दाम्पतीका लागि । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘बाँदरलाई भर्‍याङ’ । अर्को यस्तै उखान छ, ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रासँगै खायो ।’ यसको अर्थ कुनैपनि बस्तुको उपयोगितालाई बुझ्नुभन्दा त्यसको दुरुपयोग गर्नु । अतः मोबाइलको कारण किन दाम्पत्य जीवनमा खटपट आउँदैछ त ?
१. मोवाइल अहिले शंका पैदा गर्ने माध्याम बनेको छ । शंकाले सम्बन्धलाई सधै धरापमा राख्छ । दम्पतीवीच शंका पैदा हुने, मनमुटाव हुने, झै-झगडा हुने निहुँ मोवाइलबाटै सुरु भएको पाइन्छ, धेरैजसो अवस्थामा । जब श्रीमान् कार्यलयबाट घर र्फकन्छन्, श्रीमतीले उनको मोवाइल जाँच गर्न थाल्छिन् । दिनभरमा कसलाई फोन गरे, म्यासेज गरे, कोसँग फोटो खिचे इत्यादि । जब श्रीमती मोवाइल जाँच गर्न थाल्छिन्, श्रीमान्लाई झोंक चल्छ । यदि उनले कुनै छलकपट गरेका छैनन् भने उनलाई झोंक चल्छ । यदि उनले श्रीमतीलाई छलेका छन् भने त्यहीबाट झगडा सुरु हुन्छ । उनीहरुवीच विश्वासको वातावरण रहँदैन । जब दाम्पत्य सम्बन्धमा विश्वास टुट्न पुग्छ, कलह त्यहीबाट सुरु हुन्छ ।
२. श्रीमतीले मात्र होइन, श्रीमानले पनि श्रीमतीको मोवाइल कलमा सन्देह गर्न थाल्छन् । श्रीमतीले कसलाई कल गरेका छन्, किन गरेका छन् सोधीखोजी सुरु हुन्छ । हुन त आपसी शंका मेट्नका लागि यस किसिमको संवाद हुनुपर्छ पनि । यद्यपि यसमा श्रीमान् र श्रीमती दुबैको धैर्यता रहँदैन । उनीहरु एकअर्कालाई शंकालु व्यवहार गर्छन् र तर्कवितर्क गर्न थाल्छन् । यसले झगडाको रुप लिन्छ । यो त भए एकअर्काप्रति गर्ने शंका । मोवाइलले दम्पतीबीच अर्को समस्या पनि थपिदिएको छ, उपेक्षाको ।
३. जब श्रीमान वा श्रीमतीको हातमा मोबाइल हुन्छ, उनीहरु आफ्नै संसारमा मग्न हुन थाल्छन् । फेसबुक चलाउने, टिकटक बनाउने, फोटो खिच्ने, भिडियो हेर्न इत्यादि गतिविधिमा लिप्त हुन्छन् । कतिसम्म भने शयन कक्षमा पुगिसकेपछि पनि उनीहरु मोवाइलमै झुन्डिन्छन् । आपसी संवाद हुँदैन । एउटाले अर्कोलाई पूर्ण बेवास्ता गरिदिन्छ । जब दम्पतीबीच संवाद हुँदैन, अन्तरंग पल पातलिदै जान्छ, उनीहरुको प्रेम फिका हुँदै जान्छ । त्यसैगरी मोवाइलमा लिप्त भइरहँदा एकअर्काप्रति आशंका पनि बढ्न थाल्छ । खासगरी फेसबुकले यस्तो आशंका पैदा गरिदिन्छ । फेसबुक पनि अहिले दम्पतीबीच कलहको बिउँ बन्दैछ ।
४. सबै दम्पतीको स्वभाव र रुची पनि एकनास हुँदैन । कोही गीत सुन्न रुचाउँछन्, फिल्म हेर्न रुचाउँछन् । कसैलाई भने यी सबै कुरामा रुची हुँदैन । श्रीमान् र श्रीमतीबीच यस किसिमको बिजातिय स्वभाव छ भने यसले झगडा निम्त्याउँछ । अरु बेला त यसले खास फरक पार्दैन । तर, जब दम्पती शयन कक्षमा हुन्छन्, त्यसबेला एउटा पार्टनर गीत सुन्न, भिडियो हेर्न थालेमा अर्कोलाई बाधा पुग्छ । यसरी मोबाइलकै कारण विपरित रुची प्रकट हुने हुँदा उनीहरुबीच भनाभन सुरु हुन्छ । खासमा मोवाइल अति उपयोगी उपकरण हो । यद्यपि यसको प्रयोगमा केही सीमा र सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ, खासगरी दम्पतीले । नभए यो झगडाको निहुँ बन्न सक्छ ।
Previous साथीलाई अप्ठेरो परेको छ’ भन्दै राति ८ बजे घरबाट निस्किएका उनी साथीकै हातबाटै मारीए ?
Next भोलि २८ गतेदेखि सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय, कारण यस्तो !
हाम्रो समाजमा शास्त्रीय मान्यतालाई अहिलेसम्म सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको …